चीनसँग सीमा विवाद बढ्दै जाँदा कसैलाई थाहै नदिई अचानक लद्दाख पुगे नरेन्द्र मोदी – Sanchar Patrika
July 3, 2020 260
काठमाडौं । चीनसँग बढ्दै गएको तनावका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लद्दाखमा पुगेका छन् । मोदी भारत–चीनबीचको विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाख पुगेका हुन् । मोदीसहित भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने र चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत शुक्रवार बिहान लद्दाखको राजधानी लेह पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन् ।
मोदीले लेह पुगेर त्यहाँका सैनिकसँग पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् । भारत चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई देशका सेनाबीच भएको लडाँईमा भारतीय कर्णेलसहित २० जना सेनाले ज्यान गुमाएपछि भारत–चीन सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दुई देशले सीमा विवाद मिलाउन पटकपटक वार्ता गरिसकेका छन् । तर कुनै पनि वार्ता सफल भने हुन सकेको छैन् ।
Prevभ्यागुतोले विश्वकै विषालु सर्पलाई निलेपछि हेर्ने मानिसको भिड !
Nextकाठमाडौं बानेश्वरका एक जनाको को’रोना सं’क्रमणकाबाट मृ’त्यु !
घरेलुका करार कर्मचारीले एक वर्षदेखि तलब पाएनन्